Apg29 anoshandisa makeke.
By vhura Apg29 uye kushandisa mamiriro ayo, uchibvumirana pakushandisa makeke.
Apg29 anoshandisa makeke. Cookies muna Swedish. Zviri kuti peji kushanda zvakanaka uye kuti nani User ruzivo a.
Pakati pezvimwe zvinhu, macookie ashande muchimiro mashoko kwamuri zvekwaunogara kuti anokwanisa kuponesa zita renyu uye e-mail saka murege pairi nguva dzose here kunyora mhinduro. Email Your uye zita (kana Username) kunochengetwa ari Database iri pachena kwete ruzhinji. Cookies anoshandiswawo kuna Google nhamba.
Cookies vari mafaira duku zvakachengeterwa munharaunda pakombiyuta yako. Hakusi keke unogona kudya. ;) Unogona kuisa browser sei uchida mafaira izvi kushanda, kana uchida kana kwete. Kudzima zvachose chokushandisa sezvazviri pamutanhiko kuti peji haasi kushanda sezvo aida.
Mutemo musi Electronic Communications zvakachinja July 1, 2011. A gore apfuura, hurumende vakauya zano kuti mashoko anogona chete kuwanikwazve kubva uye zvakachengetwa chinouraya midziyo pamwe rokushandisa mvumo - kare, vanoshandisa anofanira kuudzwa pamusoro chinangwa makeke.
Pamberi zvakanga inokwana chete kuudza vatengi kuti mashoko kana inounganidzwa kubva kana kuchengetwa pakombiyuta dzavo - pamwe kudzayi mutemo, vachiri kuti Chapter 6. § 18, hazvina kukwana chete vaudze vatengi, zvino vatengi vo vanobvuma kuti mashoko wacho kubva kana kuchengetwerwa zvavanoshandisa. Cookie The mutemo rakagadzirwa kurera vazive chii kunochengetwa pakombiyuta imwe.
Unogona tinya kure Info mureza pazasi pamusoro makeke, tinya "Ndinonzwisisa" uye rambai vhura Apg29.
Ndapota andibate kana une mibvunzo iyi kana kunyora zviri pasi apa.
Ndinokutendai Pakushanyira Blog nzvimbo Apg29.Nu!